एनआरएनए महाधिवेशन डेढ महिनाभित्र हुने - sailungonline
२६ आश्विन २०७८, मंगलवार १९:१८ । लन्डन
गैरआवासीय नेपाली सङ्घको १० औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आगामी डेढ महिनाभित्र हुने भएको छ । सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आयोजनामा मंगलबार आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर डेढ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
उनले मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर पत्राचार गरेको पनि आरोप लगाए । ुएनआरएनएभित्रका समस्याको समाधान गर्न हामी नै सक्षम छौँ । हामीले समाधान निकाल्छौँ । म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत भेटेर यहीँ कुरा भन्छु,ु उनले भने । पन्तले मन्त्रालयले आफूसँग एक प्रकारको छलफल गर्ने तर पत्र लेख्ने बेलामा अर्कै प्रकारको पठाउने गरेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषय गौण भएको बताउँदै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आफू लचिलो हुन तयार रहेको बताए ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घका संरक्षक रामप्रताप थापाले सङ्घ अत्यन्त कठिन मोडमा उभिएको बताए । उनले निर्वाचन समितिले सङ्घको पदाधिकारीको निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको बताए ।
कार्यक्रममा सङ्घका उपाध्यक्षहरू रविना थापा, मन केसी, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, सचिव आरके शर्मालगायत राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरू, आइसिसी सदस्यहरू, केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू, केन्द्रीय पार्षद्लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
यसअघि कार्यकारी सचिवालयको आइतबार सम्पन्न बैठकले आगामी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी सो सम्मेलन स्थगित गरेको थियो । महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनमा प्रतिनिधि विवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा अस्पष्टता देखिएपछि निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् ।